Wednesday October 09, 2019 - 09:57:13 in Wararka by Wariye Tiriko
Majalada Time ayaa sheegay shaqsiyaadka la filayo iney ku guuleystaan abaalmarinta nabadda ee Nobel oo sanadkan 2019-ka lagu qabanayo caasimadda Norway ee Oslo ayaa loo badinayaa inuu ka mid noqdo Ra'isalwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed.
Hay'ad fadhigeedu yahay Ingiriiska oo lagu magacaabo Ladbroke oo badanaa arrimaha siyaasadda saadaal ka bixiso ayaa sheegtay iney Dr Abiy guusha raaci doonto wuxuuna rajada inuu guuleysto ay gaarsiisay 80% ayay tiri hay'addu.
Abaalmarinta nabadda ee sanadlaha waxay sanad walba abaalmarin siisaa shaqsiyaadka ama hay'adaha doorka weyn ku lahaa nabadda dunida.
Hay'adda bixiso abaalmarinta Nobel waxay sheegtay abaalmarinta sanadkan iney u tartamayaan 301 musharraxa oo isugu jira 223 shaqsi iyo 78 hay'adood, inkasta oo aan shaqsiyaadkaasi iyo hay'adahaasi magacyadooda la shaacin haddana waxaa soo ifbaxayo saadaalin abaalmarintaasi cidda ku guuleysan karto laga sii bixinaya.
Dadka kale ee guusha loo saadilayey waxaa ka mid ah gabadha u ololeysa isbeddelka cimilada Greta Tumburg iyo Ra'isal Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern.
Image captionRai'sal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed
Ra'isal wasaare Dr Abiy Axmed muddada kooban uu xilka soo hayey tallaabbooyin wax ku ool ah ayuu qaaday, haddana dadbaa ku dhaliilaya iney weli jiraan howla waxqabad u baahan oo Raisul wasaaraha horyaallo.
"Dhulka dowladda ayaa iska leh qodob dastuuri ah ayaana si cad u dhigaya, marka su'aal kasta oo la xiriirto dhulka waxaan ku maareyneynaa si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federalka Itoobiya", ayuu yiri
"Ciddii dana siyaasadeed oo gaar ah ku dhex wadato arrintanna waxaan u sheegayaa iney gacmaha kala baxaan ka hor inta uu sharcigu qaban" ayuu yiri